Misy Mony? Hampandoa Hetra amin’ny Fitsaboanao izany i Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 18:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, polski, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Hampiharina manomboka ny voalohan'ny Febroary ao Korea Atsimo ny rafitra fandoavan-ketra vaovao mametraka hetra 10% amin'ny fandidiana mifandraika amin'ny endrika. Tafiditra anatin'ity antsoina hoe hetran'ny hatsaràna ity na ny fandidiana endrika tahaka ny orina, ny valanorano roa, ny fanalehibeazana molotra, na ireo fikarakaràna endrika tsotra toy ny fitsaboana mony.
Milaza ilay fandoavan-ketra vaovao tamin'ny fahavaratra farany teo fa hanjaka anatin'ireo fandidiana tarehy mandeha be ao amin'ny firenena izy io, kanefa tsy nalaza mihitsy hatramin'ny fotoana nanolorana azy. Manindry [ko] (rohy maty) ireo tsikera fa paika hampitomboana ny hetra miditra fotsiny ihany io tetika io amin'ny maha lalàna mikasika ny fahasalamam-bahoaka azy. Nasehon'ireo [ko] mpampiasa aterineto maro fa tsy hahavita isakana ny fitiavan'ny fiarahamonina diso tafahoatra ny bika aman'endrika ary tsy hisy fiantraikany eo amin'ny olona manana ny fahafahana sy tena maniry mafy an'ireo fanao ireo io.
Ho an'ny @mosfkorea [kaonty ofisialin'ny Minisiteran'ny Paikady sy ny Fitantanam-bola]: Fa iza no fiheveranareo ny tenanareo no hanisy hetra ny moniko?